Kukhona ushintsho oluzayo kwi-Khosi | News24
Kukhona ushintsho oluzayo kwi-Khosi
Usihlalo nomsunguli we- Kaizer Chiefs uKaizer Motaung ukhale ngeqembu lakhe eselihluleke amasizini amabili ukuthola inkomishi eyodwa. Isithombe: Sithunyelwe
USIHLALO nomsunguli weqembu elalaziwa ngesihlabani ebholeni laseMzansi i-Kaizer Chiefs, uKaizer “Shintsha Guluva” Motaung usakhala esikaNandi ngokwehluleka ukuthola ngisho eyodwa inkomishi kumasizini amabili.
Ekupheleni kwalesizini uMotaung ubalise kwaze kwayosa ekhala ngokuthi akukholeki okwenzekile.
LoMnumzane kulezinsuku nangesikhathi ememezela ushintsho olusha nakholelwa ukuthi luzoletha impumelelo ukhala kakhulu ngendlela abadlali bakhe basemuva ebebevuza ngayo.
UMotaung ukhuluma aze akhihlize amagwebu futhi-ke akafihli lutho ukuthi kuningi okufanelwe kuqondiswe noma kuqiniswe ngaphambi kokuqala kwesizini entsha ka 2017/18.
USihlalo uthi noma ngabe uyathanda noma akathandi kuningi eqenjini okufanelwe kushintshwe, ikakhulukazi ebadlalini. Uthi ukungenelwa ngamagoli angamashumi amabili nesishiyagalombili (28) emidlalweni engu 30 kukuveza ngokusobala ukuthi inkulu inkinga emuva.
“Lokho nje kukodwa kuyichaza kuyiqede indaba noma isimo ekade sikusona,” kusho uMotaung. Uthi akufanelwe umqeqeshi uSteve Komphela ngokwenzekile nanokuthi iqembu ligcine liphelele noma liphume isine.
“Ukuqoqa yonke into eyenzekile ukuthi kunesimo esifanele silungiswe ukuze i-Kaizer Chiefs ibuyele kuleya endala esiyaziyo nehlala iwina izinkomishi.”
UMotaung uthi kuyabonakala noma kucacile kufanelwe kutholakale abadlali abazoletha umahluko kanti kukhona nababonakalayo ukuthi sebesindwa yimilenze.
“Kuzoba wumqondo ophusile nobuhlakani ukuqala manje siqalaqalaze sipheshe lapha nalapha ingakaqali isizini.”